यसकारण विस्थापित हुँदैछन प्रदेश ३ का मन्त्री केशव स्थापित !::Hamrodamak.com
यसकारण विस्थापित हुँदैछन प्रदेश ३ का मन्त्री केशव स्थापित !
स्थापितले मुख्यमन्त्री पौडेलसँग विकासका अवधारणाको विषयमा फरक बुझाइ रहेको बताए। उनले काम नहुनुमा आफू मात्रै जिम्मेवार नभएको दाबी
काठमाडौँ । स्थापितलाई मन्त्रीबाट हटाउने विषयमा पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न मुख्यमन्त्री पौडेलसहितका नेताहरुको टोली बिहीबार दिउँसो प्रदेश राजधानी हेटौँडाबाट काठमाडौँ हिँडेको छ।
‘मुख्यमन्त्रीसहितको टोली काठमाडौंका लागि हिँडेका छौं, मन्त्री स्थापितका विषयमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने तयारी रहेको छ,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो। मन्त्री स्थापितले मुख्यमन्त्रीलाई पटक पटक अभद्र व्यवहार गरेको गरेको र काम नगरेका कारण हटाउने तयारी गरिएको उनले दाबी गरे। बुधबार साँझ प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेल र मन्त्री स्थापितबीच चर्काचर्की भएको थियो। यसअघि पनि दुईबीच विवाद हुँदै आएको बताइएको छ। बैठकमा पौडेलले काम गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदासमेत कार्य सम्पादन देखिएको भन्दै स्थापितको आलोचना गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीसँग विवाद भएपछि मन्त्री स्थापित काठमाडौं फर्किसकेका छन्। पौडेलअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्ने कोसिसमा रहेका छन् स्थापित।स्थापितले मुख्यमन्त्री पौडेलसँग विकासका अवधारणाको विषयमा फरक बुझाइ रहेको बताए। उनले काम नहुनुमा आफू मात्रै जिम्मेवार नभएको दाबी गरे।
‘मेरो स्वर नै ठूलो हो। बोल्दा चर्कोजस्तो भइहाल्छ। तर, मुख्यमन्त्री र मेरो विकाससम्बन्धी अवधारणा नै फरक रहेको छ,’ स्थापितले भने, ‘काम हुन नसकेकोमा मुख्यमन्त्रीलाई दबाब होला। काम नहुनुमा मेरो मात्रै कमजोरी रहेको छैन।’ प्रदेश ३ का अर्का एक मन्त्रीका अनुसार स्थापित पहिलेदेखि नै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अलि चर्को र असमान्य रुपमा प्रस्तुत हुन्थे। ‘तर बुधबारको बैठकमा स्थापित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध गालीगलौजमै उत्रिए’, उनले भने, ‘विगतमा असहमति वा असन्तुष्टी हुन्छ तर त्यसलाई मर्यादित रुपमा राख्नुहोस् भनेर सम्झाउने गरको थियौं, हिजोको बैठकमा उनको प्रस्तुती सबैलाई छक्क पार्ने प्रकारका थियो।’
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा प्रदेश कमिटीका नेतहरुसँग छलफल गरेर स्थापितलाई हटाउन मुख्यमन्त्री पौडेल र अर्थमन्त्री कैशाल ढुंगेलल हेटौंडाबाट काठमाडौं हिंडेका हुन्।नेपाल खबरले लेखे अनुसार स्थापितसँगको विवादपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले एकै मन्त्रिपरिषदमा उनीसँग काम गर्न नसक्ने बताएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकामा पूर्व मेयरसमेत रहेका स्थापितले पहिले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका थिए। तर हेटौँडा नगरपालिकामा पूर्व मेयर रहेका पौडेलले मुख्यमन्त्रीमा बाजी मारेपछि दुबैका बीचमा टकराव देखिन थालेको हो।
बिहि, कार्तिक १५, २०७५ मा प्रकाशित